सुनेको अष्ट्रेलिया र आफैले देखेको भोगेको अष्ट्रेलिया « Sajha Page
November 19, 2017 Sun
सुनेको अष्ट्रेलिया र आफैले देखेको भोगेको अष्ट्रेलिया
प्रकाशित मिति: December 11, 2016
‘दाई म पनि अस्ट्रेलिया आउँदै छु । भिसा लागिसक्यो । के के ल्याउन पर्छ एसो भन्दिनु न,’ मैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने दाईहरूलाई सोधेका कुराहरू हुन् यी। जवाफ— दैनिक चाहिने समान ल्याऊ । एउटा कालो पेन्ट र कालो जुत्ता हाल्न चाही नबिर्सनु है।
ठूलै मान्छे बन्ने र पुनः नेपाल फर्कने सपनासहित आइयो अस्ट्रेलिया। अब यताको कुरा त कति गर्नू, धेरै कुरा पहिलो पटक देखिदै, भोग्दै र अगाल्दै दिनहरू बित्दै छन्। सुरुमा कतै नेपाली जस्तो देख्यो त बोल्न मन लाग्ने। कहाँ को भनेर सोध्न मन लाग्ने। सोधियो पनि धेरै जनालाई।
अनि खै किन हो कुन्नि नेपाली दाजु-भाई, दिदी-बहिनीहरूलाई काठमाडौँबाट भने पछि ठूलै मान्छे भन्ने लाग्दो रहेछ क्यारे। बागमती अञ्चल त के कुरा गर्नु पुरै मध्यमाञ्चल जता भए पनि काठमाडौँ भन्ने चलन रहेछ।
अर्को कुरा, यहाँको जीवन शैली। मैले देखेको प्रायः सबै जनाको २ वटा लाइफ हुँदो रहेछ । एउटा कामको र अर्को चाहीं बिदेशी लाइफ (जुन नेपालमा हुनेलाई लाग्छ) । आएको २/४ दिन बाटै बुझियो त्यो कालो पेन्ट र कालो जुत्ता ल्याउनुको अर्थ।
सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा काम गर्न चाहीँ कालो पेन्ट र कालो जुत्ता अनिवार्य रहेछ । हुन त यस्तो कुरा गर्दा राम्रो नहोला, तर जुन ठाउँमा दिशा गरेर धुनुको सट्टा पुछेर हिँड्छन त्यही ठाउँमा सबैभन्दा धेरै सरसफाई गर्नुपर्दो रहेछ। जति कुरा गरे पनि प्रायः हामी नेपालीहरूले पहिला गर्ने भनेको काम चाही क्लिनिङ नै हो। चाहे भाँडा होस् वा अरु कुनै कुरा।
यहाँको वातावरण नै यस्तो छ कि जति गर्दिनँ भने पनि केही नगरी बस्न नसकिदो रहेछ। हुन त पुगे पो बस्ने केही नगरी। आफ्नो खर्च धान्नको लागि मात्र भए पनि काम गर्नैपर्छ यहाँ । नेपालमा जस्तो पैसा सकिदा कराउने र माग्ने ठाउँ नै कहाँ हुन्छ ? सबै भन्दा महँगो एजुकेशन, एकोमोडेशन र ट्रान्सपोटेसन (शिक्षा, बसाई र यातायात) जुन कुरा तिर्दिनँ भनेर सुखै छैन।
खासमा भन्नु पर्दा नेपालमा डुलेर, बाउ आमालाई नटेरी हिड्नेहरूले सबक सिक्ने ठाउँ रहेछ अस्ट्रेलिया। तर, जीवनलाई संघर्ष मान्नेहरुका लागि भने अवसरको खानी हो अस्ट्रेलिया।
अस्ट्रेलिया आफ्नो गन्तब्य किन बनाए ? किन आए, भन्ने कुरा जान्न मन छैन मलाई। भनिन्छ, भगवानको कथा र मान्छेको व्यथा कहिल्यै पनि सकिदैन।
अर्को बुझ्न पर्ने पाटो भनेको, यहाँ आफ्नासँगै धेरै डराउन पर्दो रहेछ। मतलब अरूलेभन्दा नेपालीले नै नेपालीलाई हेप्ने र ठग्ने। पहिला काम पाउन गाह्रो पाए पछि पैसा नपाईने भन्ने डर। सुरूबाटै काम गरेर सबै पैसा पाउने मान्छे मैले यो ४ महिनासम्म भेटेको छैन।
जसको म आँफै पनि एउटा पात्र हुँ। केही पाठ, केही अनुभव र धेरै आशा बोकेर अर्को अझै राम्रो काम खोज्दा खोज्दा ४-५ महिना बित्दोरहेछ। भावनाका कुरा गरेर यसलाई झन् लामो नबनाउँ। हेमन्त रानाको ‘लैजा रे’ भन्ने गीतले सबै कुरा भन्छ हाम्रो कुरा।
काम र पढाई पछि गरिने रमाईलोको कुरै नगरौं। बाँधेर राखेको कुकुरको साङ्ग्लो फुकाल्दा पुरै गाउँ डूले जस्तो। अर्को कुरा यहाँ तैले यस्तो गरिस्, वा कसैले घरमा भन्देला भन्ने डर पनि भएन, अनि त किन रोकिनु छ? घर परिवारको बन्देजबाट स्वतन्त्र र आफैंले कमाउन सक्ने भएपछि रमाइलो गर्न झन् सजिलो।
नेपाली विद्यार्थी घर देखि टाढा हुँदा कति धेरै स्वन्तन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रमाण हेर्न कुनै नेपाली इभेन्टमा जानै पर्छ। त्यहाँ छर्लंङ देखिन्छ। जो जससँग, जसरी हिँडे पनि कसैलाई कसैको वास्तै हुँदैन। यहाँ केटा केटी सँगै हिड्नभन्दा पनि केटी केटी वा केटा केटा सँगै हिड्दा बढी शंका गर्दछन्।
पैसा खर्च गरे पछि सबै कुरा पाइने ठाउँमा अरु कुराहरूको त कुरै नगरौं, चाहाना र पैसा हुन पर्‍यो बस्। नेपालमा भएका साथीहरूले फेसबुकमा रमाएका र घुमेका फोटोहरू राखेपछि हाम्लाई (परदेशी लाई) पनि दुःखको कुरा किन हाल्न मन लाग्छ र! आखिर दुःख देखाएर सत्रुलाई किन खुसी बनाउने? यसरी नै महिना दिन को दुःख, एक दिनको रमाइलो सँग बिर्सेर उज्ज्वल भबिष्यको सपना देख्दै बित्दै छ हाम्रो अजि लाईफ। – सेतोपाटीबाट
नेपालको ढुकुटीमा कर जम्मा गर्नेमा सूर्य नेपाल सबैभन्दा ठूलो करदाता, व्यक्तिगत तर्फ सिद्धार्थ शम्शेर राणा
काठमाडौं, १ मंसिर । सूर्य नेपाल प्रालि दोस्रो पटक देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाता कम्पनीको रुपमा दर्ज भएको छ। आन्तरिक
झ्याप्प घट्यो सुनको मुल्यो !
काठमाडौँ,०१ मङ्सिर | बिहिबार प्रति तोला ५६ हजार १ सयमा कारोबार भईरहेको छापावाला सुन आज २ सयले घटेर प्रति तोला
विश्व कै ठुलो जलविद्युत आयोजना बनाउने चिनिया थ्रि गर्जेज कम्पनीसंग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्यो यस्तो सम्झौता, अब चिनिया कम्पनीले आफै लगानी गरेर सेतीबाट ७५० मेगावाट बिद्युत निकालिदिने
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिनीया थ्रि गर्जेज कम्पनी को सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन बीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका
यहि बेला घट्यो सुन को मूल्य ! किन्नेलाई मिल्यो खुसी
काठमाडौँ,३० कार्तिक | आज बिहिबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बुधबार प्रति तोला ५६ हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छापावाला
विश्वकै महंगो खुर्सानी, मूल्य किलोको २७ लाख
खुसार्नीलाई त्यसको आकारको आधारमा अनुमान लगाउनुहुँदैन । यो कुरा लागुहुन्छ अजी चारापिता नामक खुसार्नीमा । यसको आकार एउटा मटरको दाना
आज सुनको मूल्य बढ्यो !
काठमाडौँ,२९ कार्तिक | आज बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । मंगलबार प्रति तोला ५६ हजारमा कारोबार भईरहेको छापावाला सुन आज
एसियाका धनाढ्य मुकेश अम्बानी आफ्ना बच्चालाई कति दिन्थे पकेट खर्च? हरेकले पढ्नै पर्ने
प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन , यस्तो रोग लागेको खुलासा (भिडियो सहित )
मलेसियाबाट फर्केर नयाबसपार्कको होटेलमा केटि बोलाउदा आफै बुढी आए पछी के भयो होला ?(भिडियो सहित)
१६ बर्षिय किशोरीलाई नाङ्गो बनाएर सबैको सामू बलात्कार गर्न आदेश दिइयो !आखिर किन ??
ब्रेकिङ्ग-पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन
बाच्न मन थियो तर थोरै गल्ति भयो !
आजको राशिफल - वि.सं. २०७४ मार्गशीर्ष ०३ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१७ नोभेम्बर १९ तारिख
अर्घाखाँचीमा बेपत्ता बेहुलाको मृत्युपछि परिवार र श्रीमतीको यस्तो चित्कार दर्दनाक कथा - “दर्दनाक कथा” ओझेलका खवर (Exclusive स्थलगत भिडियो रिपोर्ट सहित)
आजको राशिफल - वि.सं. २०७४ मार्गशीर्ष ०२ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१७ नोभेम्बर १८ तारिख
प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन , बुबा प्रचण्ड र पत्नी बिना मगर यस्तो अवस्थामा (भिडियो सहित )
साउदीमा ५ लाख नेपालीहरु बेरोजगार बनि घर फर्कदै, त्यहाको सरकारले फेरी गर्यो यस्तो गम्भीर निर्णय, सक्दो सेयर गरि सबैमा जानकारी गराउ(भिडियो सहित)
यसकारण निदाउछन् सेक्स पछी पुरुष-जानिराखौँ(भिडियो सहित)
विवाहको दिननै बेहुलीमाथि यस्तो बज्रपात, विदाइको ४ घण्टामै फर्किनुपर्यो माइती, कारण थाहा पाउदा आशु झर्नेछ(भिडियो सहित)
हाम्रो प्रेमविवाह हो र हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । हाम्रो यौनसम्बन्ध हुनुअघि मुखमैथुन हुन्छ । मुखमैथुन नगरी सम्भोग गर्‍यो भने मेरो श्रीमान्को चित्त बुझ्दैन...